प्रधानमन्त्रीले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको डा. कोइरालाकोे आरोप | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
प्रधानमन्त्रीले अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको डा. कोइरालाकोे आरोप
जेठ ३० गते, २०७५ - ११:३३
कोइराला निवासमा आज पत्रकारसँगको भेटघाटमा उनले पार्टीको महासमितिको बैठकमा विधान पारित गरेर महाधिवेशनको प्रक्रियामा जानुपर्ने औल्याए। उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति र विधान नमान्ने गरेको आरोप लगाउँदै पार्टी एक ढिक्का हुन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले सातै प्रदेशका लागि संघीय सरकारले कूल बजेटको नौ प्रतिशत मात्र छुट्याएकाले प्रदेशको विकास निर्माण प्रभावित हुने धारणा प्रकट गरे । पत्रकारको जिज्ञासामा उहाँले कार्यकारी राष्ट्रपति राखेमा मुलुक अधिनायकवाद तथा निरंकुशता रसर्वसतावादतर्फ अग्रसर हुने सम्भावना व्यक्त गरे ।
जेठ ३० गते, २०७५ - ११:३३ मा प्रकाशित